Tag: organic ogo | Martech Zone
Tag: organic ogo
Wednesday, February 24, 2021 Wenezdee, Machị 24, 2021 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike na-efunahụ ya visibiliti nyocha. Mbugharị na ngalaba ọhụrụ - Ọ bụ ezie na Google na-enye ụzọ iji mee ka ha mata na ị kwagara na ngalaba ọhụrụ site na Console Search, a ka nwere nsogbu nke ijide azụlink ọ bụla nọ ebe ahụ na-edozi ezigbo URL na ngalaba ọhụrụ gị karịa ọ bụghị chọta (404) peeji nke. Idenye aha ikikere - ahụla m ọtụtụ oge nke ndị mmadụ
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewere ọnọdụ na nsonaazụ ọchụchọ Google?
Tọzdee, Septemba 13, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Mgbe obula m kọwara ogo nye ndi ahia m, a na m eji ihe omuma atu nke uzo ugbo ugbua ebe Google bu oke osimiri na ndi nile gi na ya agha bu ugbo ndi ozo. Somefọdụ ụgbọ mmiri ka ibu ma ka mma, ụfọdụ agba ochie ma ọ fọdụ n’elu mmiri na-ese. Ka ọ dịgodị, oké osimiri na-akpụ akpụ dị ka nke ọma… na oké ifufe (algọridim mgbanwe), mmiri na ebili mmiri (search ewu ewu crests na troughs), na N'ezie na aka iso ewu ewu nke gị onwe gị ọdịnaya. E nwere oge ụfọdụ m nwere ike ịchọpụta
Ozugbo ụfọdụ ndị folks ghọtara na njikọ dị na saịtị ndị dị na mpụga nwere ike ime ka ọkwa Google gị kwalite, ụlọ ọrụ SEO gbawara na uto. Ọ bụ otu ijeri dollar ahịa ma Google ngwa ngwa kwụsịrị inye ndị ọrụ nnukwu nsonaazụ. Ọ ghọrọ asọmpi nke onye kwụrụ ụgwọ maka ọtụtụ backlinks. Obi dị m ụtọ, maka ndị ahịa ziri ezi, ndị SEO a na-aghọ aghụghọ akwụsịla kpamkpam. Ngbanwe mgbanwe Google algorithm ekpughere njikọ nke ọma ma ha ebidola
Agbanyeghi na o bu ihe na-egbochitere onwe ya, nyocha Google weputara ihe omuma a iji nye ihe akaebe banyere uzo igbanwe site na onu ogugu na-agbanwe mgbe a na-achota ihe nchoputa ihe ndi ozo. Mekọrịta abụọ ahụ nwere ike inyere gị aka ịzụ ahịa site n'akụkụ abụọ dị iche iche… na-enye obere ala na ụlọ iji pịa na nsonaazụ ọchụchọ engine. Ihe ọzọ kpatara ya, nke nwere ike bụrụ ihe dị oke egwu, bụ ịchụpụ opekata mpe otu onye asọmpi!
Akwụkwọ Google kọwara
Wenezdee, Jenụwarị 9, 2008 Tuesday, January 6, 2015 Douglas Karr
Google Docs abụwo ngọzi n'ezie maka ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-eto eto nke 5 (naanị akwụ ụgwọ nke ise anyị)! Anyị enweghị sava ma ọ bụ ngwa ọrụ netwọkụ ịkekọrịta. N'ikwu eziokwu, anyị achọghị otu. Mgbe m bidoro, a na-ebufe ederede site na email wee bụrụ ihe mgbagwoju anya! Akwụpụrụ m Google Docs ma malite ịchekwa akwụkwọ… mgbe ahụ anyị kwagara Google Apps ma ugbu a anyị niile na-echekwa